Mety Ho Lalana Iray Hanasemporana Ireo Media Tsy Miankina Ny Fanamboarana Aterineto Haingam-pandeha Any Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2014 16:55 GMT
Mety ho tapitra atsy ho atsy any Rosia ny paradisan'ny fitoviana hahazo vaovao. Sary natambatr'i Kevin Rothrock.
Ato ho ato, mety hanome alalana ireo Mpamatsy Tolotra Aterineto (ISPs) ny Sehatra Federaly Miady amin'ny Fanjakazakàna Tokana (FAS), ho afaka maka sarany amin'ireo vohikala manaiky ny handoa vola amboniny ho an'ny fandefasana votoaty manan-danja mila omena tombon-dahiny.
Nilaza ny FAS hoe : nahatonga fitomboana be mahavalalanina tamin'ny habetsahan'ireo angon-drakitra mifamezivezy ao amin'ny Aterineto ny lazan'ireo vohikala sy ireo tolotra ahitàna votoaty mila “bande passante” betsaka, sahala amin'ny YouTube sy Skype. Mitaky fampiasam-bola vaovao ho an'ireo fotodrafitrasa nasionaly ny fitomboan'ny zavatra alefa ao amin'ny tambajotran'ny serasera Rosiana, kanefa mitaraina ny ISPs fa tsy maharaka ara-bola izy ireo.
Toy ny zava-misy maneran-tany, feo mifanohitra tanteraka amin'ny tsy fiandanian'ny Aterineto ireo Rosiana mpamatsy tolotra Aterineto, izay misy ho azy sy midadasika be ao Rosia, kanefa tsy voasoratra ara-dalàna. Rostelecom izao, mpisehatra mitàna ny laharana voalohany amin'ny serasera ao an-toerana, izay an'ny fanjakana Rosiana ny ampahany betsaka, dia nanameloka ny Skype ho nibodo loatra ny “bande passante”-ny, ary avy eo nanome alalana ireo mpampiasa azy hanao antso “maimaimpoana”, raha tokony hampiasa ny tolotra antson'ny Rostelecom izy ireo. Araka ilay orinasa, ny taona 2009 fotsiny, niteraka fatiantoka nitentina 6.7 lavitrisa robla ($166 million USD) ny fampiasan'ireo mpampiasa ny Skype.
Na dia tsy voasoratra mazava hoe arovan'ny lalàna Rosiana aza ny tsy fiandanian'ny Aterineto, karakarain'ny ISPs Rosiana mitovy tsara daholo ireo serasera amin'ny Aterineto rehetra, rehefa mifanaraka amin'ny “eritreriny” na ny “bande passante” ilaina ho an'ny fitaterana azy. Marihana fa feran'ny ISPS Rosiana ireo serasera sasany noho ny antony politika — fomba fanao izay mifanohitra amin'ny foto-kevitry ny tsy fiandanian'ny Aterineto, izay tokony hikarakaràna mitovy tàntana ireo serasera rehetra, tsy misy fanavahana.
Mbola vitsy ary mbola lavitra ihany koa ny andinindininy mikasika ilay tetikasa hanisy farany ny tsy fiandanian'ny Aterineto Rosiana. Hatreto aloha, vao namosaka ny tolokeviny tamin'ny governemanta fotsiny ny FAS, izay hanapa-kevitra — tsy fantatra hoe hafiriana. Ny tena marina, na ny fanambaràn'ny FAS aza dia toa tampotampoka be ihany. Vao volana vitsivitsy izay, ny lehibeny, Igor Artemyev mihintsy no naneho ny fanohanany ny fotokevitra tsy fiandanian'ny Aterineto, nilaza fa tokony hitovy tsara daholo ny fikarakaràn'ny ISPs ireo votoaty rehetra.
Azontsika tsindriana indray aloha maneno daholo ny nofinofisintsika nandritra ny am-polo taona farany ny fiafaràn'ny “fanandevozan'ny finday” [ny fampidirana ny fahafahana mitondra an-tànana ny nomeraon'ny telefôna] ary ny fahatongavan'ny tsy fiandaniana ara-teknolojika, tsy fiandanian'ny Aterineto, ny fifaninanana eo amin'ny tambajotra mampiasa tariby sy ny finday, sy ny hafa ihany koa.
Ankehitriny anefa, mitoroka ny Kaomity Federaly misahana ny Serasera (FCC) any Etazonia ny FAS, amin'ny resaka tsy fiandanian'ny Aterineto. Mitaky ny ISPS hanome tolotra kely, natao ho “fototra” fotsiny izany ny tolokevitra vaovaon'ny FAS, fa afaka mitaky vola ireo orinasa mba hanomezany tolotra haingana kokoa ho an'ny votoaty mahazo tombon-dahiny.
Mbola olana tsy voavaha any Etazonia ny tsy fiandanian'ny Aterineto, izay ahitàna ny toa tsy fandraisan'ny FCC ny tena fanapahan-kevitra, na dia teo aza ny fanambaràn'ny Filoha Obama, ny 9 Oktobra, hoe toheriny ny “famoronana antanan-tohatra roa na telo na efatra amin'ny Aterineto.” Rehefa miresaka fehezan-dalànan'ny Aterineto, matetika maka tàhaka ny politika nandramana tany Etazonia ireo tompon'andraikitra Rosiana. Amin'ny “fakàna tahaka” an'i Etazonia, afaka miaro tena i Maosko hoe “nitondra tena toy ireo demôkrasian'ny Tandrefana.”
Miankina amin'izay ataon'ny FCC momba ny tsy fiandanian'ny Aterineto, mety mila mamerina mijery ny porofony amin'ny fanovàny ny fanavaozana ny politikany ny FAS any Rosia.
Ao Rosia, izay ahitàna fihenana haingana ho an'ny anjaran-toeran'ny media tsy miankina ety anaty aterineto, mbola loza mananontanona iray hafa fanampiny indray koa ny mety hisian'ny fanivànana ny votoaty amin'ny Aterineto. Raha avela hanjakazaka tokoa mantsy ny ISPs Rosiana, raha vao vohikala mpanome tolotra no resaka, indray andro any mety ho tonga saina ihany ireo mpampiasa ka hahita ireo media ao amin'ny Aterineto miandany an'i Kremlin mahazo tolotra haingam-pandeha kokoa mihoatra noho ireo media tsy miankina any an-toerana.